ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၉-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၉-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- လက်ပံတောင်း အင်အားသုံး ဖြိုခွဲမှု ၈ လပြည့် ဆန္ဒပြ click
- ရွှေဂက်စ် စတင် ပို့လွှတ်သည့် အခမ်းအနား မထင်မရှား ကျင်းပ click
- တရုတ်-မြန်မာ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဓာတ်ငွေ စပို့ click
- တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖွင့်လှစ်ပွဲ ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- ကျောက်ဖြူ-ယူနန် ရထားလမ်း ၂၀၁၅ အပြီး တည်ဆောက်မည် click
- သီလ၀ါစီမံကိန်းက ကမ္ဘာ့ဘဏ်စည်းမျဉ်းအတိုင်း လယ်မြေများကို နစ်နာကြေးပေးမည် click
- အာမခံဆန်ဈေး မသတ်မှတ်ရေးနှင့် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု ကာကွယ်ပေးရန် လိုနေသည့် တောင်သူလယ်သမား ဥပဒေကြမ်း click
- ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ လယ်ယာမြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ထံ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- တောင်ကြီးမြို့ နောင်လေနှင့် ပန်းတင်အုပ်စု မြေအငြင်းပွားမှု ဒေသခံများကြား စိတ်ဝမ်းကွဲနေ click
- စပါးသီးနှံ အထွက်နည်းပြီး စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှု ကြုံတွေ့နိုင် click
- စစ်အစိုးရခေတ် ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကို ရာထူးပြန်လည်ခန့်အပ် click
- စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၏ မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ပြန်ကြားရေးက ရေဆုံးမြေဆုံးထိ ကန့်ကွက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် (ရုပ်သံ) click
- စာနယ်ဇင်းများ၏ လိုလားချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် ဆွေးနွေးမည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဆို (ရုပ်သံ) click
- မီဒီယာဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာနယ်ဇင်းကောင်စီ ရှင်းလင်း (မေးမြန်းချက်) click
- လားရှိုးမြို့တွင် ပုဒ်မ၁၄၄ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း click
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အစိုးရနှင့် KIA တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား click
- ၇ နာရီကျော် ဖြစ်ခဲ့သော တိုက်ပွဲအပေါ် RCSS တို့ သဘောထား click
- အစိုးရနှင့် TNLA တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည် click
- ဒေသတွင်း တိုက်ပွဲတွေက TNLA နှင့် အစိုးရတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲကို လွှမ်းမိုးနိုင် click
- ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းဖို့ကို အမြဲ တံခါးပေါက် ဖွင့်ထားပါတယ် (အင်တာဗျူး) click
- အဖွဲ့စုံ ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသားညီလာခံ စတင် ကျင်းပ click
- ပြည်တွင်းပြည်ပ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ညီလာခံ စတင်ကျင်းပနေ click
- တိုင်းရင်းသားညီလာခံကြီးကို PDF အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် click
- တိုင်းရင်းသားညီလာခံ ပထမရက် ပြည်ထောင်စုစစ်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးပါ အချက်များ ဆွေးနွေး click
- မည်သည့်ရာထူးမှ မမျှော်လင့်၊ သျှမ်း/တောင် ရုံးခွဲများ ဖွင့်ပွဲ၌ SNLD ဥက္ကဌ ပြော click
- ဖားအံမြို့တွင် KYN ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ လုပ်ငန်း Team ဖွဲ့စည်း click
- ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ပြည်ပ-ဂျပန်) ညီလာခံနှင့် အမူဆောင်သစ် ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပ click
- အစိုးရစစ်တပ်ကို တိုင်းရင်းသားများ ဆန္ဒပြ click
- မွန်တိုင်းရင်းသားများ ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ click
- အစိုးရမှ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကို ရှုတ်ချသည့် ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် click
- ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် ရန်ကုန်မြို့၌ ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပ၊ သမ္မတ ဗီဒီယိုမှ စကားပြော (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်က ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုပွဲ ကျောင်းသားတပ်မတော် တက်ရောက်မည် click
- ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုပွဲလာရန် ဗီဇာခက်ခဲသူများ အချက်အလက်အပြည့်အစုံ တင်ပြနိုင်ပါက ၀င်ခွင့်အတွက် ကူညီမည် click
- မသန်စွမ်းအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် လေ့လာမည် click
- ပြန်လည်ကုစားရေးနှင့် အတိတ်က ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- အမျိုးသမီးတွေဟာ ခွေးလောက်တောင်မှ တန်ဖိုးမရှိသလို ဖြစ်နေတယ် (အင်တာဗျူး) click
- ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- ရွှေတိဂုံစေတီတွင် စက္ကူဗူးကို ဗုံးအထင်ဖြင့် ထိတ်လန့် click
- မြန်မာ့တပ်မတော် ရေယာဉ်များ မောင်တောသို့ ၀င်ထွက်ရာတွင် ကြိုအသိပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- မဲဆောက်မြို့တွင် မိုးဆက်တိုက် ရွာသွန်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲ click
- ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီနှင့် မဲဆောက်တွင် ရေကြီး click
- ရခိုင်တွင် မိုးသည်းထန်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီး၍ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုများလည်း ရှိနေ click
- ဘားအံနှင့် ငါးသိုင်းချောင်းတွင် မြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် ကျော်လွန် click
- မိုးကြီး ရေလျှံ၍ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ၃၁ ခု ဖွင့်ရ click
- လူ ၂,၀၀၀ ခန့် နေသည့် ရွာ ရေကြီးမှုကြောင့် နေရေး စိုးရိမ်ရ click
- မွန်တို့ ဆောက်ထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ အရှည်ဆုံး သစ်သားတံတား ကျိုးပျက် click
- ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ယာယီပတ်စ်ပို့ပြု လုပ်ရန် ထိုင်းအစိုးရမှ သက်တမ်းတနှစ်ထပ်တိုး click
- ပြည်ပ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ရှောင်ပြီ click
- ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးသွားများကို ကောက်ရသည့် အခွန်လျှော့ပေးရန် ၀န်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြသွားမည် click
- ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူးခရီးစဉ် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးပြီဟု သာသနာရေး ဒု-ဝန်ကြီး ပြော (ရုပ်သံ) click
- ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် အမျိုးသားဓနရှင်များအတွက် အခန်းကဏ္ဍ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဂျပန် ပါဝင်နိုင်ရန် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် မူဘောင် သဘောတူညီချက်စာချုပ် ပြန်ပြင်မည် click
- ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ၇၅ နှစ်စီမံကိန်း အဆင့်ဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာ click
- ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ရေး တင်ဒါခေါ်မည်ဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- တနင်္သာရီတိုင်း သတ္တုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်း click
- ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားဇုန်တွင် အဆောက်အအုံသစ်များ ဆောက်လုပ်မှုအတွက် အမြင့်ပေ ကန့်သတ်သွားရန် ရှိ (ရုပ်သံ) click
- လူကြိုက်များလာသော ဆူဇူကီးပစ်ကပ် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာ click
- မထသ (မြို့တွင်း) ကော်မတီတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ ပါဝင်လို click
- မထသရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒီမိုကရေစီမဆန်၊ ဥပဒေသစ် ပြဌာန်ပေးရန် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- လားရှိုးစည်ပင်မှ အခွန် ၃ ဆမှ ၅ ဆထိ တိုးကောက်မည့်အပေါ် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိနေ click
- မြိတ်ခရိုင် မောတောင်ဒေသ သြဂုတ်တွင် ၂၄ နာရီ မီးလင်းပြီ click
- နန်းဖာလုံဈေး လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီး ပြန်ဖွင့်နေသော်လည်း အရောင်းအ၀ယ်ပါး click
- လူကုန်ကူးမှု ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးရုံးများကြောင့် တရားမ၀င် မြန်မာလုပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း လျော့နည်းဟု ဆို click
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို သတ်ဖြတ်မှု သံသယရှိသူကို ဇာတိရွာအထိ ရဲ လိုက်ဖမ်း click
- မန္တလေးကျုံးဘေး ဓားခုတ်ခံရသူ ရဲက အကူအညီမပေးဟု ဆို click
- စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတွင် စွန့်ပစ်လူနာများ များပြားလာ၍ ရပ်တည်ရန်ခတ်ခဲနေ click
- မန်း NLD ၏ ဒုတိယမြောက်အခမဲ့ ဆေးခန်း သြဂုတ်လတွင် ထပ်မံဖွင့်မည် click
- မြန်မာနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ ပူးပေါင်းမည် (ရုပ်သံ) click
- အမျိုးသမီးများဘ၀ လုံခြုံရေး ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါ (ရုပ်သံ) click
- ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ မန္တလေးနှင့် အခြားသမိုင်းပုံရိပ်များ စာအုပ်ထုတ်ဝေ click
- ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပညာရည်ချွန်ဆုများအတွက် ကျပ်သိန်း ၆၀၀ ကျော် သုံးစွဲ click
- ရခိုင်သဟာယအသင်းမှ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်အဆင့် ကျောင်းသား ၂၂၈ ဦးကို အခမ်းအနားဖြင့် ပညာတော်သင် ထောက်ပံ့ကြေးဆု ချီးမြှင့် click
- ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်တွင် အိုင်းရင်းခရောခ့်ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ်ခအား ဈေးမတက်နိုင်အောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ click
- မြန်မာ့အနုပညာ အရွေ့နဲ့ ဒုတိယ ပြတင်းကပေးတဲ့ အတွေးစ click
- ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ (ရုပ်သံ) click
- အသက်လိမ်ထားသည့် ကစားသမားများတွေ့ပါက ယူ-၁၉ နည်းပြအဖွဲ့ကို အရေးယူမည်ဟု ဦးဇော်ဇော် သတိပေး click
- ယခုနှစ်ကုန်တွင် MFF ဥက္ကဌရာထူး ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည် (ရုပ်သံ) click
- အိန္ဒိယ အခမဲ့ အစားအစာ အစီအစဉ် ကျောင်းနေရေးအတွက် အားပေး click
- B Sample ဆေးစစ်မှုတွင်လည်း တိုင်ဆန်ဂေး တားမြစ်ဆေး သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
နောက်ဆုံးတော. တရုတ် ကလိုချင်တဲ. သဘာဝဓါတ်ငွေ. လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ.
က ရလေပြီ ။
ဓါတ်ငွေ. ခွဲတမ်း သုံးရတဲ. ရာနှုန်း တိုးတောင်း သင်.ပါတယ် ။
.. အခြား အာရှနိုင်ငံတွေလို CCTV-5 အားကစား ရုပ်သံလိုင်း ကိုလည်း
ပြည်တွင်းမှာ ရဖို.လည်း အားကစားတိုးတက်ရေး တရုတ်ဆီကတောင်းသင်.တယ် ။
သုံးမရတဲ. CCTV-4 , CCTV -9 တွေက Useless ပါ ။